के यो निःशुल्क मुख्यालय सूची संग backfollow प्राप्त गर्न सम्भव छ?
यो लेख वेबमास्टरहरूलाई उच्च गुणस्तर निर्माण गर्ने सबै भन्दा राम्रो तरिकाले ब्याकलिङ्कहरू पालना गर्न प्रदर्शन गर्न डिजाइन गरिएको छ. त्यहाँ पुरानो चालहरू छन्, तर त्यहाँ अझै पनि सबै वेबसाइट मालिकहरू जुन उच्च प्राधिकरण बनाउन चाहने म्याग्दीको रूपमा काम गर्दछ, ब्याकलिंकहरू थप सान्दर्भिक र लक्षित यातायात प्राप्त गर्न चाहन्छन्।. हामी लिङ्क इमारतको बारेमा केही आधारभूत सिद्धान्तको साथ सुरु गरौं.
SEO मा ब्याकलिङ्कहरू के हो?
ब्याकलिङ्कहरू जुन फरक च्यानलहरु मार्फत तपाईंको वेब साइटबाट अन्य वेब स्रोतबाट लिङ्क भएका लिंकहरू हुन्. अधिक अन्य प्राधिकृत ब्ल्यागहरू तपाईंको साइट URL को उल्लेख गर्दै छन् वा, निम्न गुणस्तरले तपाईंको साइटमा दिनेछ. Backlinks एसईओ रैंकिंग कारक को रूप मा सेवा गर्दछ जसबाट तपाईं केहि उच्च या कम से कम मध्यम गुणवत्ता backlinks को निर्माण गर्न छिटो आफ्नो कुनै पनि लक्षित खोज शब्द को रैंक गर्न सक्छन्. आगमन लिङ्क दुई उपश्रेणीहरू - dofollow र nofollow backlinks छन्. विजेता लिङ्क निर्माण अभियान निर्माण गर्न यी दुई कोटिहरू बीचको भिन्नता बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ.
DoPlease backlinks those who haveaspecial tag with your site URL link. ई. (rel = "dofollow") वा साधारण लिङ्कको साथ पनि ब्याकलिंक dofollow को अर्थ छ. यस प्रकारको ब्याकलिङ्कहरूले वेब पेजमार्फत सबै ट्राफिकहरू ट्राफिक गर्ने लिङ्क गरिएको वेब स्रोतको निश्चित मूल्यको स्वामित्व राख्दछ.
नोफिकेसन ब्याकलिङ्कहरू हुन् जुन तपाईंको वेब स्रोत यूआरएल लिङ्क कुनै-पछि ट्यागको साथ दिन्छन्।. ई. (rel = "no-follow"). यदि तपाइँ कुनै लिङ्क पछ्याउन चाहानुहुन्छ भने रिले ट्याग थप्न महत्त्वपूर्ण छ.
अब, जब तपाईं dofollow र nofollow लिङ्क को अंतर जान्नुहुन्छ, यो समयको लागि dofollow backlinks सूची सिर्जना गर्ने सबै भन्दा राम्रो अवसरहरू छलफल गर्न समय हो।.
एक dofollow ब्याकलिंक सूची सिर्जना गर्ने तरिका
त्यहाँ आउने लिङ्कहरूको बन्डलहरू बनाउन र तपाईंको साइट पेज रैंक सुधार गर्न केही व्यावहारिक र निःशुल्क तरिकाहरू छन्।.
यो लिङ्क निर्माण गर्ने एक कुशल विधि हो जुन तपाईं बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न।. फेसबुक एक PR9 (लगभग उच्चतम) साइट हो जुन तपाईंको साइटले Google बाट अधिक प्राधिकार प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ.
फेसबुकमा ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न, तपाईंले पृष्ठमा स्थिर HTML थप्न आवश्यक छ. यसले ठूलो अनुकूलन आईराइम ट्याबहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ. त्यसो गरेर, तपाईंले एक पृष्ठ ट्याब खोल्नुहुनेछ जसमा तपाईंले आफ्नो फेसबुक पेज चयन गर्न आवश्यक छ. त्यस पछि, तपाईंलाई सेटअप ट्याबमा क्लिक गर्न आवश्यक छ र तपाईंको स्थिर एचटीएमएल एपलाई अनुक्रमणिकाद्वारा पुन: निर्देशित गर्नुपर्नेछ. html खण्ड. यहाँ तपाईंले एचटीएमएल कोड थप्न आवश्यक छ, त्यहाँ तपाईको साइट सान्दर्भिक URL सम्मिलित गर्दै. यो प्रक्रिया समाप्त गर्न, तपाईंलाई बचत र प्रकाशित बटनमा क्लिक गर्नु आवश्यक छ. त्यसैले अब तपाईंसँग एक उपयुक्त लोकप्रिय सोशल मिडिया प्लेटफर्मबाट उपयुक्त डाइफाइक ब्याकलिंक छ.
एक नियमको रूपमा, YouTube लाई ब्याकलिङ्कहरू फिर्ता दिइदैन।. तथापि, त्यहाँ अझै पनि केहि मुद्दाहरू छन् जसले तपाइँलाई एक उच्च उच्च आउने आउने लिङ्कसँग तपाइँको dofollow ब्याकलिङ्क सूचीमा पुग्न मद्दत गर्नेछ. तपाईंले केहि शीर्ष रेट गरिएको यूट्यूब भिडीयोहरू खोज्नु पर्दछ जसले तपाईंको वेबसाइटको सामग्रीसँग सम्बन्धित छ र त्यसपछि तपाईंको लिङ्कहरूलाई टिप्पणीमा राख्नुहोस् Source .